PSEUDO-HEMLOCK: SHARAXAADDA CAANAHA, NOOCYADA, ASTAAMAHA BEERASHADA, DHALASHADA, TALOOYINKA DARYEELKA - BEERTA
Naqshadaha casriga ah ee casriga ah ayaa sii kordhaya iyagoo adeegsanaya naqshad jilicsan ee qaabeynta sawirada, jardiinooyinka iyo waddooyinka, laakiin dadka intooda badan, oo ay soo maraan geedkan quruxda badan, waxay u qaadan doonaan qoryahooda caadiga ah. Haa, labada noocyada waxay leeyihiin qoyska weyn ee Sosnovykh, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan sida ay qaraabo yihiin, dhejisku ka yar tahay dalbanaya daryeelka, iyo taajkii waa mid aad u qancin karo xirfadaha ubaxyada. Laakiin si aad u hesho geed leh raaxo iyo awood xoog leh si ay u noqdaan qurxin nool, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sirta ee beerto iyo sii kordhaya.
Maanta warshadkan quruxda badani waxay ku dhejisaa magacyo kala duwan - pseudo-guntin, beenaala-qadhaadh, Douglas, Douglas fir, muuqaalka muuqaalka kaas oo la xidhiidha helitaanka noocyadaas.. Waxaa markii ugu horreysay laga helay North America oo uu ka qaaday Scot Archibald Menziz, laakiin wuxuu u qaaday geedkii dabka. Inta badan, qaladkiisa waxaa hagaajiyay botanist English David Douglas, oo sheegay in noocyada cusubi ay leeyihiin farqi weyn oo dibadda ah oo ka dhexeeya qoryaha caadiga ah.
Ma taqaanaa? Markii ay barteen sifooyinka macallin-qoraha, aqoonyahanadu waxay soo gebogebeeyeen in geedku awood u leeyahay inuu noolaado muddo 1000 sano ah. Isla mar ahaantaana, wakiilka qadiimka ah ee qoyskani waa 700 sano. Tijaabadan gaarka ah ee Maraykanku wuxuu ku koraa Maraykanka, wuxuu leeyahay mitir dhan 100 mitir iyo 4 mitir dhexdhexaad.
Naqshadda-horyaal waxaa lagu aqoonsan karaa sifooyinka soo socda:
dherer aan caadi ahayn. Waqooyiga Ameerika, geedku wuxuu gaari karaa dherer ahaan 100 m, xaaladaha cimilada yurubiyanka ah waxaa si dhif ah u koraaya 50 mitir, laakiin horeba way uga sarraysaa qoryaha caadiga ah;
qaabka taajka iyo midabka. Beenaale dhalinyaradu waxay leedahay sifo taajir ah oo loo yaqaan 'family pine', oo ah, sida ay koreyso, isu beddesho, wareega. Qaybta hoose, waqtiga, waxay qaadataa midab dufan ah sababtoo ah rinjiga sii deynaya geedku;
buruun. Miraha ku fidsan dhererka (illaa 12 cm) oo leh miisaanno lakabaysan oo laga soo bilaabo laamihii, isla markiiba soo jiidanaya dareenka. Xayawaanka qaarkood, saldhigga qoryaha waa guduud, taas oo siinaysa jilcan dheeraad ah; Pseudo-cones
cirbadaha. Marka ugu horeysa, waxay u eg yihiin fir fircoon, laakiin waxay cadahay in aanay ka dheerayn midabka dhalaalaya oo kale. Haddii aad xoqdo irbadda farahaaga, dhoobada geedaha iftiinka ayaa isla markiiba muuqan doona.
Asal ahaan, qoryaha darbiga ah ayaa lagu wareersan yahay qoryaha, dhir, sababtoo ah laamaha la midka ah: iyada iyada, waxay sidoo kale koraan geedka.
Waxaan kugula talineynaa inaad ka akhrido sida loo koro firirka goobta iyo dheriga, sida loo faafiyo, iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee ay leedahay.
Psevdotsugi waxay leedahay tiro faa'iido leh oo ay bannaanka u jecel yihiin. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Kobaca dhaqso. Sannad kasta dhirta waxaa la soo saaraa 40-50 cm, sidaa daraadeed sannado yar gudahood horeba waa mid aad u wanaagsan "deggane" ayaa laga arki doonaa goobta;
caabbinta barafowga. Waa suurtagal in la kulmo goobo cayiman oo ku yaalla Waqooyiga Yurub, laakiin dhulka ku yaala bartamaha waxaa si wanaagsan u dulqaadan kara barafka iyo qabow, iyo mahadsanaan xoog leh oo xoog leh, ma daryeesho dabaysha;
ma cabsanaynin ecology xun. Geedkani wuxuu aad ugu riyaaqaa deegaannada magaalooyinka halkaas oo heerka qashinka sunta ah uu ka baxayo miisaanka.
Waqooyiga Ameerikaanka ah ayaa si caadi ah loo tixgeliyaa meesha uu ku dhashay ee xayawaanka, markaasoo botanistayaashu ay markii hore fiiriyeen geedkan. Si kastaba ha ahaatee, adduunka oo dhan waxaa jira 18 nooc oo ah jawaanno been abuur ah, qaar ka mid ah waxay ku koraan oo kaliya Japan, Shiinaha, iyo muuqaalka muuqaalka geedka England ee qarnigii 19aad, wuxuu bilaabay inuu ku faafo guud ahaan Yurub. Dhanka asalka maanta waxaa laga helaa oo kaliya dooxooyinka, wabiyada ku dhow, dhulka jiifa. Iyo baahida loo qabo qurxinta, inta badan noocyada taranta ayaa loo isticmaalaa.
Taasi ma ahan mid aad u sarreeya, taajkooduna badanaa wuxuu ku yaalaa heerka qofka indhaha ah ee dhererka dhexdhexaad ah, isaga oo siinaya fursad uu ku qanco in uu ku faafo boogaha cufaanka leh iyo quruxda quruxda badan.
Ma taqaanaa? Maanta aduunka ma jiraan wax badan oo nabaro ah oo ka badan 100-200 sano Sida ciriiriga xoogga leh, geedkaas wuxuu inta badan ku dhacaa dhibane sharci darro, sababtoo ah alaab ka samaysan alaab khaas ah oo ku yaal suuq madow waa qaali.
Dhammaan 18 nooc oo kala duwan ayaa isku midka ah, sidaas awgeed waxaan si gooni ah u xushay kuwa leh dabeecadaha gaarka ah.
Magaca caalamiga ah ee dhawaaqyada kala duwan sida tan - Jasiiradda Pseudotsuga. Wakiil ka mid ah noocyada noocan oo kale ah waxaa lagu dabooli karaa jasiiradda Japan ee Honshu oo ah meel sare oo ka sareysa 500 m oo ka sarreysa heerka badda. Geedka ayaa si fudud u dareemaya in uu ku dhowaado webiyada, godadka qotada dheer, oo ku wareegsan kuwa kale. Cimilada khafiifka ah iyo ciidda ka soo baxa dhagaxyada volcanic ayaa abuuray xaalado wanaagsan oo kor u kaca iyo dhalmo.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaato waxa ay yihiin dhirta iyo duurka.
Dhuxusha Jasiiradda Japanese waxay dhifeyso heerkul dhan 30 m, iyo dhexroorka gaduudku ma aha wax ka badan 150 cm.
Taajka dhirta geedka wuxuu ku yaalaa qeybta sare, rukuucyada cagaarka ee caleemaha cagaaran iyo hoos udhaca wax yar. Laanta jaalaha ah ee jaalaha ah ayaa kor u kacaya, iyagoo daboolaya midab-beereedka April iyo abuurka abuurka bisha October. Jasiiradda ka baxsan, geedka waxaa laga helaa oo keliya arboretums, halkaas oo marar dhif ah ayay qaadataa si fiican.
Waa muhiim! Maanta dalka Japan, tirade dhejiyeyaasha waa wax aan ka badnayn 2,000, maadaama ay si firfircoon u saameeyeen marwalba, marwalba way adag tahay in dib loo bilaabo.
Pseudotsuga macrocarpaama bac weyn, waxay magaceeda u keentay midhaha ugu weyn ee noocyada kala duwan ee pseudo-dutsug: waxay gaari karaan dherer ah 15-18 cm. Dufanka ka mid ah shubanku waa mid aad u ballaadhan, ma awoodaan inay dhaqdhaqaaq yeeshaan, sidaas darteed qaybinta ukunta been abuur ah waxaa bixiya shimbiraha.
Inkasta oo xayawaankan oo kale ah, koritaanka geed laftiisa waa yar yahay - 15-30 mitir. Waxa kale oo ay ku kala duwanyihiin jilif beedka, kaas oo lakabyo dhuuban oo adag oo adag iyo kuwo kale oo adag. Waa jilif khaas ah oo si joogta ah u badbaadiya dab-bakhti-dabka oo ka soo baxa dabka ka soo baxa California, halkaasoo geedku korayo. Waxaad isaga kula kulmi kartaa buuraha galbeed iyo taambuugyada buuraha, iyo dooxooyinka, iyo meelaha cidlada ah ee ka hooseeya webiga shishadiisa.
Inkasta oo ay udubdhexaad tahay ballac weyn oo qoyan oo qoyan, waxay si fiican u koraan degitaanka, degaamaha, si aanay dadkoodu halis ugu jirin.
Waqtiga adag, geedku wuxuu cirbadaha ku xiraa oo wuxuu ku jiraa xaalad hurdo ilaa 2 sano ah, ka dib markii isbeddel ku yimaado duruufuhu waxay ku dhacdaa xoog cusub.
Ma taqaanaa? Dhibaatada ballaadhan ee ballaadhan ayaa awood u leh inay sii kordhiso xaalado gaar ah: shaybaarro badan ayaa ku dheggan buuraha buuraha ee xagal ka badan 35 digrii.
Pseudotsuga Menziesiiama Beenaalayaasha Menzies - Nooca kaliya ee asalka ah ee astaamaha soo koraya ee Europe. Tani geedka qoraxda leh oo leh qajaar adag ayaa leh 10 nooc oo kala duwan. Shaybaarku waxay ku kala duwan yihiin midabka casaan-gaduudka ah ee laamaha, waxoogaa kor u kaca, iyo jilif fudud oo ku jira jiriga. Xubnaha waayeelka ah ee xayawaanka waxay leeyihiin boogaha mugdiga ah ee mugdiga ah, iyo jilibka waqti ka dambeeya waxay helayaan hillocks iyo laalaabkii. Cudurka Mensez ee pseudo-tosugi waa cillad, cirbadaha waa gaaban, 2-3 cm oo dheer.
Noocaankan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Douglas.tan iyo markii uu ahaa kii ugu horeeyay ee la kulmay David Douglas inta lagu guda jiray safaarada North America. Muuqaalka Menzies wuxuu asaas u ahaa noocyada xulashada, oo ka mid ah kuwa ugu caansan waa "Compacta", oo ah "Densa" iyo "Glauca Pendula".
Laakiin jacayl gaar ah ee bannaanka iyo qurxinta waxay ku guuleysteen "Glauca", oo la mid ah spruce leh buluug ah oo raaxo leh.
Pseudotsuga sinensis caadi ahaan Shiinaha, Taiwan iyo Vietnam. Halkan inta badan waxay ku adkaataa xuddunta heerkeedu yahay 3300 m oo ka sarreysa heerka badda, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan noocyada kale ee pseudo-suet, waxay jeceshahay in ay joogaan dhirta daacad ah.
Ma taqaanaa? Deegaanka deegaanka ayaa inta badan isticmaala pseudo-tosug si loo soo celiyo kaymaha ka dib dabka. Tani waxay sabab u tahay heerka korodhka kobaca.
Waxaa laga yaabaa in sababta ay tahay sababta noocyada Shiinaha uu leeyahay taaj weyn, qaabka ay u egtahay geedaha qallafsan. Iyada oo ku saleysan cirbadaha khafiifka ah, laba jibbaar cad ayaa u muuqda, iyo talooyinkooda waa cagaar dhalaalaya. Caleemaha abuurka dhirta ayaa ku faraxsan caleenta cagaaran, midabada madow-madow ee u dhow dhamaadka Oktoobar. Horaantii, inkastoo qowmiyadaha qadiimka ah ee dhexda gaduudka ilaa 2 m weli wali la heli karo, ayaa loo isticmaalay dhismaha dhismayaasha iyo buundooyinka, laakiin maanta waa dhammaaday.
Horumarka geedka this ma aha mid la caddeeyay aragtida dhaqaalaha Shiinaha, sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in ay la kulmaan nacasta duurjoogta ee qoto dheer ee dalka, kaydka ama arboretums.
Kordhinta guri-guri-guri ee xaaladaha guriga uma baahna kharashyo badan ama dadaal, waxa ugu muhiimsan waa in la raaco tilmaamaha aasaasiga ah ee doorashada meel iyo carrada.
Haddii boosku u oggolaado qulqulka, markaa waxaad isticmaali kartaa geedo kale oo qulqulaya qaabaynta muuqaalka. Waxay noqon kartaa thuja galbeedka "Brabant" ama "Kolumna", juniper "Skyrocket"; maaha meelo ballaadhan oo aad dhali kartid: xayawaannada cirifka ah ee Canadian, cawska, geed cawska ama miro yar yar.
Inkasta oo dadka waaweyni ay aad u adag yihiin, gooynta yar yar ayaa u baahan doona daryeel taxadar leh. Dooro meelaha ay degaan ee ku yaala iftiinka iftiinka.
Caleemuhu ma noqon karaan qorraxda dhalaalaya, taas oo dhaawici doonta maqaarkooda xasaasiga ah, laakiin maqnaan la'aanta oo dhammaystiran waxay u nugul tahay koritaanka geedkii mustaqbalka.
Qalabka laf-dhabarku wuxuu awood u leeyahay in uu koro si kastoo ciid ah, marka laga reebo qulqulka qoyan. Haddii aad rabto inaad kiciso koritaanka geedkii mustaqbalka, ka dibna u isticmaal fursadaha ay ugu jecel yihiin:
carrada qoyan ee oxamen, laakiin iska ilaali dhoobada dhererka iyo ciid nadiifi;
ciidda karbonatiga podzolic;
substrate of land caleen (3 qaybood), peat iyo humus (2 qaybood midkiiba).
Aaladaha lebenkii jabay iyo dhoobo dhoobo hoose ee godka for seedling dhamaystiran sawirka.
Goobidda bogga-caleemaha ayaa suurtagal ah laba siyaabood: isticmaalaya abuur iyo gooyn.
Waa muhiim! Sidoo kale waa suurad wacan in jirku dabooli karo dabaysha wakhti ilaa inta uu xoogaa ku filan yahay, haddii kale jirridda ayaa la gooyaa.
Doorashadani waa mid aad u adag, laakiin markaa waxaad heli doontaa geedo badan. Nidaam dheer oo sii kordhaya ayaa sii kordhaya xasilloonida geedaha mustaqbalka, waxay ka dhigeysaa mid xooggan.
Seeds in koonfureed caadi ahaan soo baxaan 2-3 sano kasta ee October. Iyo bisha November waa la isticmaali karaa. Dhulku wuxuu ku jiraa weel yar oo leh substrate si qoto dheer oo ah 2 cm, oo daboolaya dusha sare leh mulch. Wixii geedo mustaqbalka biqilka waxaa la dhigayaa qol leh heerkul aan ka badnayn 20 ° C. Seeds of a pseudo-hedgehog 5 sano ee ugu horreeya waxay u fiicantahay dhirta in ay gudaha ku jirto, iyo marka ay gaaraan da'daan, waxaa lagu beeray dhul furan.
Qodobka dabiiciga ah ee suurtogalka ah ayaa suurtagal ah in qaboojiyaha caadiga ah. Ku rid faashad qoyan caag balaastig ah kuna rid bacda.
Ku rid qaboojiyaha 2-3 maalmood, dhirta diyaar u yihiin beeritaanka. Dhismuhu wuxuu adkeynayaa geedo mustaqbalka ah, taas oo u ogolaaneysa inay si fudud u dulqaadaan dhaxan xilliga qaboobaha.
Waa muhiim! Haddii miraha sannadkii hore ama miraha ka weyn loo qaato beerto, ka dibna waxaa loo baahan yahay in la dhajiyo.
Laakiin xusuusnow in la keydiyo abuurka beeritaanka dheeraad ah waa qol qabow, xaaladahaas oo kale, waxay jiifsadaan 10 sano. Laakiin qolka diiran, abuurku wuxuu dhacayaa sannad gudaheed.
Seeds Gagaab xilliga gu'ga. Waqtigaan, waa in la soo qaado jidka, iyo dayrta goor dambe, ku dabooli filim hore ee dhaxan.
Kuwa aan rabin inay sugaan beeritaanka cusub 5 sano waa inay doortaan guntooda. Nidaamka falka ee kiiskan waa sida soo socota:
guga, ka hor muuqaalka kore ee ku hari hore, waxaan dooranaynaa geed ugu yaraan 4 sano jir ah;
ka mid ah caleemaha dhinaca, gooyaa jirida, laakiin had iyo jeer leh cirib ah - gabal dhuxul ah saldhiga;
waxaanu hoos udhignaa kicinta kiciyaha kobaca dhawr maalmood si loo siiyo xoog dheeraad ah;
marka heerkulka dibeddu ay gaari doonaan 20-23 ° C, meel yar oo madow leh waxaanu samaynaa ceel, buuxi substrate kor ku xusan, ha iloobin dheecaan;
waxaan qaadnaa jirida oo si taxadar leh ugu beeri xagasha 60-70 digrii, haynta jihada cirbadaha.
Waa muhiim! Inkasta oo habkani yahay mid la aqbali karo si toos ah loogu beerayo dhul furan, khabiiro waxay ku talinayaan in qaabka loo kaydiyo dheriga sanadkiiba si loo helo horumarin asaasi ah.
Inta u dhaxeysa 1-1.5 bilood, abuurka dhalashada cusub wuxuu qaadataa xidid meel cusub. Haddii dhirta dhirta loo qorsheeyay in la beero hal mar, markaa masaafada ugu wanaagsan waxay noqon doontaa 1.5-4 mitir, iyadoo ku xiran hadba inta uu le'eg yahay geedaha baaluqa.
Sidee ugu fiican ee dacaayada?
Labada hab ayaa leh faa'iido iyo macaamiishooda, laakiin khubarada ayaa doorbidaya in ay la shaqeeyaan abuurka halkii ay gooyn lahaayeen. Inkasta oo habkani yahay mid dari badan, geedo badan ayaa u adkaysta dhaxan, cayayaanka, iyo carrada saboolka ah.
Gooynta waxaa loo isticmaalaa kiisaska loo baahan yahay si dhakhso ah u koraan geed.
Wixii kasta ee aad soo degto aad doorato, caleemaha dhalinyarada waxay u baahan doonaan daryeel isku mid ah:
fiirso cimilada. Guga dabayaaqada - xagaaga hore, marka uu jiro fursad dhaxan, ha iloobin in ay daboolaan seedling leh dhar aan duubneyn habeenkii: qabooba xilligaan koritaankiisu waa burbur. Iyo dhamaadka xilliga dayrta waxaad ku dhajin doontaa jirida caleemaha ama laamood dhirta si uu u qaato kuleylka jiilaalka;
Ma taqaanaa? Marka loo eego dhirirka ugu dheer dunida oo dhan, dhererkoodu wuxuu qaadanayaa meel saddexaad, oo ka danbeeya midka aaladaha Australiyaanka ah iyo casriga Maraykanka.
Xusuuso qorraxda. Rinjiga subaxda iyo habeenku waa u fiicnaanshaha dhalinyarada, laakiin maalintii waa in lagu hayaa hooska, gaar ahaan xagaaga. Haddii kale waxaa jiri doona gubasho on jilif;
waraabinta. Haddii aysan jirin wax roobab ah oo la arkayay wakhti dheer oo dhulka hoostiisa ku yaalo waxay bilaabmeysaa inay ku daboolaan dildilaaca, biyaha biiyaha toddobaadkii hal mar (25 litir oo biyo ah ayaa ku filan hal mar). Iyadoo kuleyl aad u daran, kordho inta jeer ee la waraabiyo waraabinta. Sidoo kale, dhirta si farxad leh u aqbalaan subaxda iyo fiidkii;
dabacsanaanta. Si qoyaanka si fiican u dardar geliyo ciidda, iyo sidoo kale helitaanka ogsijiinta xididdada, ha iloobin in ay si joogto ah u daboosho carrada agagaarka geedka;
xoqidda. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ay ka soo baxdo burooyinkeeda u muuqda guga iyo dayrta, laakiin taajajinta taajka ma aha mid lagama maarmaan u ah dhalinyarada yar-yar. Waxaa badanaa lagu sameeyaa oo kaliya ujeedada ah in geed lagu siiyo qaab qurxin leh;
dharka sare. Kobcin la'aan la'aanteed ma sahlanaan doonto in la maareeyo 2-ta sano ee ugu horreeya ee koritaanka, sidaa darteed marmar bacrimiya ciidda ku hareereysan leh peat ama humus.
Waa muhiim! Bannaanka u badan, daryeeshaa caleemaha yar yar ee psevdotsugi, xiro laamihiisa dayrta. Haddii kale waxaa jira halis ah in jiilaalka ay jebin doonaan miisaanka barafka.
Xeerarka daryeesha warshad qaangaar ah
2-3ka sano ee ugu horreeya ka dib markii la beero dhul furan ayaa muhiim u ah alwaax. Haddii ay sax tahay inaad ilaaliso fuuq-celinta inta lagu jiro mudadan, ka dibna mustaqbalka laf-dhabar-xameedka wuxuu ka heli doonaa dhibaatooyin kasta iyada oo aan gargaar la helin.
Inkasta oo beenaaluhu aanu ka hor imaanayn qoyaan dhexdhexaad ah, waxay si degan u dulqaadaneysaa abaar. Wakhti aad u dheer, waxay ku socotaa roob la'aan, laakiin haddii aad rabto inaad nolol u sahlanaato geedaha inta lagu jiro muddooyinka abaarta, markaa waxaan u oggolaaneynaa waraabinta joogtada ah. Mararka ku filan 10-12 litir oo biyo ah. Ilaa iyo inta laga yaabo in dhoobo-yare uu yaryahay iyo dhererka gaaban, waxaa kale oo ay faa'iido u tahay in ay ku buufiso taajkii.
Shaybaarka dadka waaweyni gabi ahaanba uma baahna manjooyin, laakiin waxaa loo dulqaadan karaa haddii loo baahdo. Iyada oo ay sabab u tahay awooddan, geedaha waxaa loo isticmaalaa meelaha lagu qurxiyo, sababtoo ah taajkooda waa ay fududahay in la sameeyo qaabka la doonayo.
Ka dib sanadguuradii 4aad-5aad, beenaale ayaa hore u ahaa geed weyn oo aan u baahnayn quudin dheeraad ah. Waayeelka wuxuu helayaa, kan weyn ee cirbadaha lakulmay hoosta, kaas oo, ciriiri, oo quudiyo cirbadeynta.
Ma taqaanaa? Dhammaan xubnaha qoyska ee Pine waxay leeyihiin cirbado kuwaas oo ah mobile. Guga iyo xagaaga, waxay u dhaqaaqaan wax yar oo ka baxsan laamaha, iyo xilliga qaboobaha, lid ku ah, riix jilif jilicsan, sida haddii ay isku dayaan in ay hoyga ka qabsadaan.
Intaa waxaa dheer in taajkii caleenta, bannaanka u jecel yahay pseudo-hull ay u adkaysashada cudurada iyo cayayaanka. Xaalado aad u dhif ah, waxay ku dhici kartaa fungus ama aphids.
Fungus wuxuu ku fidiyaa xididada iyo garbaha. Sababta muuqaalkeeda waa qoyaan xad dhaaf ah ama infakshan laga helo dhir kale. Haddii ay suurtogal tahay, sababahan waa in si deg deg ah loo dhisto lana baabi'iyo. Iyo in lagu daweeyo meelaha ay saameeyeen daawooyinka anti-fungal (Baktofit, Vitaros). Aphid marar dhif ah ayuu ku hanjabaa nambarada soodhaweynta, waxaa lagu soo celiyaa ur aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jirto, shakhsiyaadka u adkeysanaya ayaa la helay, ka dibna geedku waa in lagu buufiyaa cayayaanka ("Aktara", "Commander", "Corado").
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loola tacaalo cayayaanka qashinka.
Psevdotsuga - qurux badan oo loogu talagalay goob kasta. Geedkan geedaha geedaha Pine waa wax aan hoos u dhicin ciidda iyo daryeel dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee, waxay ka farxin doontaa milkiilaha leh taaj culus. Sidaa darteed, ma aha wax la yaab leh in naqshadeeyayaasha muuqaalka ayaa sii kordhaya iyada oo loo isticmaalayo beddelidda geedo dhaqameedka iyo kicinta.